သင့် အိမ်မှာ ဒီလိုအဖွဲ့တွေ လာရင် လုံးဝ တံခါး ဖွင့်မပေးပါနဲ့ - အများသူငါတွေ မခံရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ - TAWTHU
မလိမ့်တပတ်…… အိမ်သာအနံ့ဆိုးတွေ မရအောင်ဆေးဖြန်းပေးတာပါတဲ့
အင်္ကျီအဖြူ,လုံချည်နက်ပြာဝတ်မိန်းကလေး(၃)ယောက်, အင်္ကျီအဖြူအနက်ရောင်ယောပုဆိုးဝတ် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကို, ရပ်ကွက်ထဲမှ,ရပ်ကွက်ဘာသာရေး, လူမှုရေးအကျိုးဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက,အိမ်တံခါးခေါက်ခေါ်ပေးလာပါတယ်။
အမျိုးသားကအိမ်တံခါးဖွင့်ပေးပြီး,ကျမကအိမ်သာဆေးရည်နဲ့,အမြဲဆေးကြောင်း,အိမ်သာတံခါးဖွင့်ပေးပြီး, ထောင်ထားတဲ့ဆေးဗူးများ ကို ပြလိုက်ပါတယ်။
အိမ်သာထဲပိုက်နဲ့ဖြန်းပေးပြီးတော့,အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့အပြာဝတ်တွေမှ, အန်တီ့ကိုရှင်းပြ လိမ္မယ်ဆိုလို့ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရာ, အပြာနုရောင်ဆေးထုပ်လေးကိုစားပွဲပေါ်တင်ထားပြီး, ဒီဆေးနဲ့အိမ်သာထဲတစ်ထုပ်လုံးဖောက်ချပေးရင်, အိမ်သာပိုက်လိုင်းအတွင်းပိုင်းပါသန့်စင်၍, ဓါတုပစ္စည်းမပါပဲ, ဇီဝပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားလို့ အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း, ဖြန့်ဝေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။
ကျမက, ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးကလား,NGO. အဖွဲ့ကလားလို့ မေးမြန်းရာ,မဟုတ်ပါကြောင်းဖြေဆိုပြီး,ဆေးတစ်ထုပ်ကို,ကျပ်ငွေသုံးထောင်(၃၀၀ဝိ/-)ဖြစ်ကြောင်း,
နောင်ဆို,ရပ်ကွက်ထဲမှာဘယ်သူပဲလာ,လာသာရေး,နာရေး,လူမှုရေး,ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အိမ်တံခါးကို,မဖွင့်ပေးတော့ဘူးလို.—- အလှူခံများလည်း,စိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်။
မလိမျ့တပတျ…… အိမျသာအနံ့ဆိုးတှေ မရအောငျဆေးဖွနျးပေးတာပါတဲ့
အကငြ်္ီအဖွူ,လုံခညျြနကျပွာဝတျမိနျးကလေး(၃)ယောကျ, အကငြ်္ီအဖွူအနကျရောငျယောပုဆိုးဝတျ ယောကျြားလေးတဈယောကျပါတဲ့အဖှဲ့ကို, ရပျကှကျထဲမှ,ရပျကှကျဘာသာရေး, လူမှုရေးအကြိုးဆောငျအမြိုးသမီးတဈဦးက,အိမျတံခါးခေါကျချေါပေးလာပါတယျ။
အမြိုးသားကအိမျတံခါးဖှငျ့ပေးပွီး,ကမြကအိမျသာဆေးရညျနဲ့,အမွဲဆေးကွောငျး,အိမျသာတံခါးဖှငျ့ပေးပွီး, ထောငျထားတဲ့ဆေးဗူးမြား ကို ပွလိုကျပါတယျ။
အိမျသာထဲပိုကျနဲ့ဖွနျးပေးပွီးတော့,အိမျရှမှေ့ာထိုငျနတေဲ့အပွာဝတျတှမှေ, အနျတီ့ကိုရှငျးပွ လိမ်မယျဆိုလို့ဧညျ့ခနျးမှာထိုငျရာ, အပွာနုရောငျဆေးထုပျလေးကိုစားပှဲပျေါတငျထားပွီး, ဒီဆေးနဲ့အိမျသာထဲတဈထုပျလုံးဖောကျခပြေးရငျ, အိမျသာပိုကျလိုငျးအတှငျးပိုငျးပါသနျ့စငျ၍, ဓါတုပစ်စညျးမပါပဲ, ဇီဝပစ်စညျးဖွငျ့ပွုလုပျထားလို့ အန်တရာယျကငျးကွောငျး, ဖွနျ့ဝတောဖွဈကွောငျးပွောပါတယျ။
ကမြက, ဒသေန်တရ ကနျြးမာရေးကလား,NGO. အဖှဲ့ကလားလို့ မေးမွနျးရာ,မဟုတျပါကွောငျးဖွဆေိုပွီး,ဆေးတဈထုပျကို,ကပျြငှသေုံးထောငျ(၃၀၀ဝိ/-)ဖွဈကွောငျး,
နောငျဆို,ရပျကှကျထဲမှာဘယျသူပဲလာ,လာသာရေး,နာရေး,လူမှုရေး,ဘာပဲဖွဈဖွဈ, အိမျတံခါးကို,မဖှငျ့ပေးတော့ဘူးလို.—- အလှူခံမြားလညျး,စိတျမဆိုးကွနဲ့နျော။
အစိုးရက သင့်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု